मैले बुझेकी आमा ! – Sajha Achham
२०७८ जेष्ठ ३१ सोमबार ०३ बजे ४० मिनेट
मैले बुझेकी आमा !
शंकर बि.क : जननी जन्मभूमिपश्च स्वर्गादपी गरियसी आफूलाई जन्मदिने आमाबुबा भन्दा ठुलो यो संसारमा कोही हुदैनन् कवि- भुपी शेरचनको भनाइलाई हामी कहिल्यै विर्सन सक्ने कुरा पनि भएन ।
सृष्टि कर्ताको अपमा पाएकी आमा लाग्छ मेरो लागि उनी जति यो संसारमा प्रिय् कोही छैन । आमाको सम्मानका खातिर दर्जनौं उपमाहरु दिदै पनि आएको छ दुई अक्षरले निर्मित आमा शब्द विशाल छ। आमा जननी जन्मदाता र कर्मदाता हुन ९-९ महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर हुर्काउने बढाउने लालनपालन गर्ने पढाउने लगायतको कामहरू पनि आमाले नै गर्नुहुन्छ । सन्तानको खुशी र सफलतालाई नै आफ्नो खुसी र सफलता ठान्ने आमा आफुलाई बिर्सेर सन्तानलाई अगाडि बढ्ने बाटो देखाउने शक्तिपूंज आमा हुन ।
सबै खाले अठ्यारोमा सबैको मुख-मुखमा झुन्डिएको हुन्छ चाहे त्यो बाटोमा लड्दा होस् या कार्यलयमा काम नबन्दा होस् वा विदेशमा काममा अठ्यारो आउदाहोस् सबैको मन मुटु र मुख- मुखमा आमा शब्द नै आउछ अठ्यारोमा आमा नसम्झने सायदै होलान ।
आमाको कार्यक्षेत्र जति विशाल र विस्तृत छ । त्यति नै महत्त्वपूर्ण र उच्च छ । वास्तविक भन्ने हो भने आमा सगरमाथा भन्दा अग्लि छन ।पृथ्वी भन्दा महान र विशाल छन तर यस्तै ढुङ्गा माटो जस्तै कठिन तथा कठोर छैनन् । समुद्र भन्दा गहिरी छन तर नभेटिने भने होइनन् । त्यसैले आमाको माया अपरम्पार रहेको छ ।
जसलाई बजारमा किन्न पाइदैन परम्परा देखि नै आमालाई माता जननी धर्ती देवी लगायतका विभिन्न रूपमा हामी पुज्दै आइरहेका छौँ । आमाको अर्ती उपदेशलाई सधै सिरोपर गरेर यात्रा गर्दा सफलता नजिक हुन्छ भन्ने भनाइ पनि हाम्रो समाजमा प्रचलित छ। पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा आमाबुवा कुनै विशेष पर्वमा मात्र सम्झने पश्चिमी परम्परा भित्रिएको जस्तो देखिन्छ ।
बाचुन्जेल आमालाई सम्मान गर्न नसक्नेले मरेपछि मेरि आमा यस्ती उस्ति भन्नेहरु पनि हाम्रो समाजमा प्रशस्त छ्न । अर्कोतर्फ सम्पत्ति हुन्जेल आमाबुबा र सम्पत्ति नहुदा वृद्वाआश्रममा पुर्याउने छोराछोरी पनि हाम्रो समाज नै छन ।
मातातिर्थ औशिको दिन औपचारिकताका लागि आमा भेट्ने जाने आमा गुमाएकाहरुले दानदक्षिणा गर्ने चलन बस्नथालेको छ। सबैलाई मातातिर्थ औशीको शुभकामना छ ।